Shiinaha asbestos warshad bacda qashinka iyo alaab-qeybiyeyaasha. BAOTE
Asbestos waa macdan xadiid ah oo laga heli karo qalabka dhismaha ee kala duwan, sida sibidhka. Asbestos waxaa si ballaaran loogu adeegsaday ujeeddooyinka dahaadhka ee dhismayaasha la deggan yahay bilowgii qarnigii 19aad iyada oo ay ugu wacan tahay kuleylka kuleylka wanaagsan. Intii lagu gudajiray qarnigii 19aad, dhibaatooyin caafimaad oo daran oo laxiriira fiilooyinka asbestos ayaa soo ifbaxay, taas oo keentay in asbestos laga mamnuuco UK, Ireland iyo inta badan wadamada yurub tan iyo 1990's.
Bacote Team Qashinka Asbestos Qashinka Ka Qaadista kaa caawin doona inaad ka takhalusto qashinka asbestos. Waxaad ka heli doontaa boorsooyin yaryar iyo waaweyn oo si gaar ah loogu talagalay in lagu saaro qashinka halista ah. Boorsooyinka burburka, boorsooyinka waaweyn, bacaha konteynarrada ... dhammaantood waxaa lagu daabacay digniinta rasmiga ah ee loo yaqaan 'asbestos' waxayna u hoggaansamayaan xeerarka Midowga Yurub ee ka saarista asbestos ee nabdoon
Bacdayada Sheet-ka Asbestos-ka iyo kiishka weyn ee asbestos-ka waa badbaado oo waxay ku habboon yihiin in loo raro qashinka halista ah ee loo yaqaan 'asbestos'. Dhammaan boorsooyinka waxaa loo soo saaraa si waafaqsan heerka UN-ka.
Bacda Xaashida Asbestos waxay leedahay cabirro badan, tusaale 70cm * 25cm * 60cm, 40cm * 60cm * 85cm, 100cm * 100cm * 100cm, 150 * 150 * 80cm, 250 * 150 * 40cm, 250 * 150 * 80cm. Waxaan sidoo kale kuu qaabeyn karnaa cabbirro cusub.
Boorsooyinkayaga asbestos-ka waxay leeyihiin bac dibadda ah iyo bac gudaha ah. Bacda kore ee boorsadani waxay ka samaysan tahay qalab cusub oo PP ah; Bacda gudaha ka samaysan waxay ka kooban tahay 100% maaddo pe cusub ah.
Marka loo eego kala duwanaanshaha suuqa, dhumucda iyo dhismuhu waa kala duwan yihiin. Bacda qashinka ee asbestos-ka nooca yurubta ahi waxay leeyihiin labalaab lakabyo PE ah, nooca Newzealand nooca bacda qashinka lagu baaro ayaa leh hal lakab PE ah. Haddii aad rabto inaad faahfaahin barato, si toos ah waad noola soo xiriiri kartaa, waan kuu sharxi doonaa oo waxaan ku siin doonnaa dalab ugu fiican.
Hore: Qashinka birta ah ee birta ah
Xiga: Bacda Sumpp Skip
Dambiisha Qashinka Asbestos
U Bolts, Hex handarraabbadeedii, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, Gawaarida Gawaarida, Qaab dhismeedka, Lag Bolts,